Star Wars™: Force Arena 3.2.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.2.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Star Wars™: Force Arena
Star Wars™: Force Arena ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Star Wars ™ခုနှစ်တွင်: အင်အားစု Arena, ကစားသမားကတော့ galaxy အတွက်အများဆုံးပြင်းထန်သော Real-time multiplayer တိုက်ပွဲအချို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့မည်!
မြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပြင်းထန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု-ထုပ်ပိုးထို့အပြင်သို့ Star Wars ™ယူနစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ကစားသမားဦးဆောင်လမ်းပြ။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဒိုင်းလွှားကိုမီးစက်၏ပျက်စီးခြင်း: သင်သည်သင်၏အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိရန်အထူးကဒ်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အဖြစ် Single-handedly စစ်တိုက်ရာဒီရေကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုအစွမ်းထက်စွမ်းရည်တိုက်ဖျက်မည်။
Star Wars ™: အင်အားစု Arena ချောမွေ့စွာအဆုံးစွန်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်ကြံ့ခိုင်ဇာတ်ကောင်စုဆောင်းခြင်းစနစ်, အဆင့်မြင့်အဆင့်မြှင့်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုရောက်ပြီး။
● Battle သို့မဟုတ် Real-time 1v1 သို့မဟုတ် 2v2 PvP နယ်ပယ်တွင်တိုက်ပွဲများအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှအခြားကစားသမားနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း။
ထိုကဲ့သို့သော Rey နှင့် Kylo Ren အဖြစ်နောက်ဆုံး Jedi ဇာတ်ကောင်: ●အထင်ကရ Star Wars အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခဲ Darth Vader, လုကာ Skywalker, အထွေထွေကြမ်းတမ်းသော, ဟန်တစ်ကိုယ်တော်, မင်းသမီး Leia, ပင်သစ်ကို Star Wars ™အပါအဝင်တပ်များ, ™!
●ဇာတ်ကောင်ကတ်များစုဆောင်းစစ်တိုက်၌သင်တို့၏ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအစွမ်းထက်ဇာတ်ကောင်ဆိုပြီးပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေချိန်မှာသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Star Wars ™ယူနစ် upgrade ။
●သင် Galactic ကြီးစိုးအဘို့သင့်ခရီးအပေါ်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှကိုတက်အဖြစ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ပါဝင်သဖြင့်ဆုလာဘ်, အထူးဇာတ်ကောင်များနှင့်အခြားဆုကြေးငွေပစ္စည်းများဝင်ငွေအရည်အချင်း!
ဒီ app ကမ်းလှမ်းမှုကို※ In-app ကိုဝယ်ယူမှု။ သင်သည်သင်၏ Device ရဲ့ setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ဒီ feature ကို disable နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင်ကစားရန်အနည်းဆုံးအသက်3နှစ်ရှိရမည်။
- Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=en
- သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=en
Star Wars™: Force Arena အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Star Wars™: Force Arena အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Star Wars™: Force Arena အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Star Wars™: Force Arena အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 48.05k 18.3M
Star Wars™: Force Arena ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Star Wars™: Force Arena အခ်က္အလက္
Release date: 2019-02-21 06:45:39
လက်မှတ် SHA1: 8B:95:ED:98:ED:1B:5A:E4:D1:F9:9E:72:FD:0E:2C:7F:5F:73:AF:03
ထုတ်လုပ်သူ (CN): starwars
Star Wars™: Force Arena APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ